Nihena 150 ariary ny gazoala izay ampiasain’ny ankamaroan’ny taksibrosy sy ny taksibe. Lojika raha hisy fidinany ihany koa ny sara-dalana, ary tena manantena izany ny mpandeha. Moa va hikitika ny saran-dalana ihany koa ny mpitatitra sa mbola hijanona amin’ny teo aloha ? Ahiana ny hisian’ny fifamaliana eo amin’ny mpandeha sy ny resevera manomboka anio. Raha ny fantatra mantsy dia tsy mbola manana eritreritra hampidina ny saran-dalana mihitsy ireo mpitatitra. Tena vesatra iray goavana ho an’ny isan-tokantrano amin’izao vidim-piainana lafo dia lafo izao anefa izy io. Azo eritreretina ve ny hisian’ny fihaonan’ny filoham-pirenena amin’ny mpitatitra ihany koa mba handinihana azy io ? Ho hita eo ny tohiny.